Xiaomi Mi MIX Alpha: esi sisiphumo saso sokutshaja esimangalisayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ngaba kubiza ibhetri? Hayi, ngumtsalane weXiaomi Mi MIX Alpha
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo umvelisi waseAsia wazisa eyona fowuni yakhe inomdla. Hayi, asinayo i-flip yefowuni okwangoku, kodwa Xiaomi Mi MIX Alfa Ngummangaliso kwinqanaba lobuhle. Kude kube ngoku, akukho mntu ubesazi ukuba zeziphi izinto ezinokuthi zinikezwe kweso sikrini siphantse sigubungele ngokupheleleyo le ndawo inomdla ngokubhekisele kuyilo.
Ukuphendula lo mbuzo, umenzi akathandabuzi ukupapasha ividiyo yeXiaomi Mi MIX Alpha, esibonisa amathuba anokubonelelwa siscreen sayo. Ewe sinokonwabela iindlela ezintsha zokwenza uninzi lwamathuba esi sixhobo sinomdla, kwaye le vidiyo ngumzekelo ocacileyo woku.
Imowudi yayo yokutshaja kuphela, iXiaomi Mi MIX Alpha sele kufanelekile ukuyithenga
Kwakungexesha lokuboniswa kwesixhobo apho uXiaomi wasibonisa ukusebenza okunomdla ngokwenene, kwaye loo nto yenza umona wabo nabakhuphisana nabo. Ngale ndlela, kwaye njengoko ubonile kule vidiyo, i Xiaomi Mi MIX Alfa Inefuthe lokugcina xa ukutshaja oko kuyamangalisa.
Ewe, kufanele ukuba kuthiwe yeyona fowuni ibiza kakhulu kwimbali yeXiaomi, iya kuba malunga ne-2.500 ye-euro, ke yimveliso leyo bambalwa kakhulu abasebenzisi abaya kuba nakho ukufikelela kuyo, kodwa lixabiso lokuhlawula ngokutshintshela ukwazi ukonwabela uyilo olwahlukileyo. Kwaye, ukunqongophala kwezakhelo, kuba isikrini sigubungela uninzi lwee-terminal ngaphandle kwenxalenye apho kugcinwe khona iikhamera, kwenza ukubonakala kwayo kube liziko lawo onke amehlo.
Okungakumbi, kuthathelwa ingqalelo amathuba anokubonelelwa sesi sixhobo, njengokusebenzisa imifanekiso yamaphephadonga aya kwenza ukushiya iXiaomi Mi MIX Alpha etafileni ibe ngamava okwenyani eemvakalelo. Eyona nto imbi kukuba akuyi kubakho ndlela yokusebenzisa isiciko ngokufanelekileyo, ke ngekhe ube nakho ukhuseleko olongezelelekileyo. Ewe kunjalo, ukuba unokubetha i-2.500 ye-euro kwiselfowuni, ngokuqinisekileyo eli candelo liza kukukhathaza ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ngaba kubiza ibhetri? Hayi, ngumtsalane weXiaomi Mi MIX Alpha
I-Galaxy S9 iya kuhlaziya kwi-Android 10 kungekudala
Umlandeli weGolden Fold ukumiliselwa kwihlabathi liphela